I-Atlantic Ocean: izici, ukubaluleka, isimo sezulu, izimbali nezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El ulwandle olwandle kungumzimba wamanzi olwandle wesibili ngobukhulu emhlabeni. Iqukethe ubukhulu bezinhlobo zezilwane nezitshalo kuyo. Igeza ogwini lwamazwe amaningi nasemazwekazini amaningana. Indawo yayo ingamakhilomitha-skwele ayizigidi ezingama-106.4. Le ndawo ithatha ingxenye yesihlanu yawo wonke umhlaba. Ukubaluleka kwalolu lwandle kuphakeme kakhulu esintwini nakubo bonke abanye abantu abahlala kulo. Ngakho-ke, sizokunikezela le ndatshana kuwe ngokujulile.
Uma ufuna ukwazi konke okuphathelene noLwandlekazi i-Atlantic, lapha sizokuchazela ngokuningiliziwe.
2 Impumuzo nesimo sezulu
3 Izimbali nezilwane
4 Ukubaluleka koLwandle i-Atlantic
Lolu lwandle lunobuso balo obunjengendilinga enwetshiwe eS. Isuka e-Eurasia, e-Afrika iye empumalanga naseMelika iye entshonalanga. Imboza cishe i-17% yabo bonke ubuso bomhlaba. Kuyaziwa ukuthi ulwandle olunosawoti kakhulu emhlabeni. Inezindawo ezishisayo nokuhwamuka okuphezulu ngenxa yamazinga okushisa ajwayelekile aphezulu.
Cishe kuzo zonke izindawo zalo, ukujula okuphakathi cishe kumamitha ayi-3.339. Iqukethe umthamo wamanzi angama-cubic kilometres angama-354.700.000. Imvamisa, amanzi anosawoti asezingeni lama-25 degrees enyakatho naseningizimu yeningizimu. Ngakolunye uhlangothi, sithola izindawo eziningi ezishisayo lapho amazinga okushisa ephakeme, izinga eliphezulu lokuhwamuka ngentengo yalo. Ngaphezu kwalokho, kulezi zindawo lapho amanzi ehwamuka ngobuningi obukhulu, kuvame ukuba nemvula encane. Enyakatho nenkabazwe kulapho kutholakala khona amazinga anosawoti aphansi kakhulu, ngoba izinga lokuhwamuka liphansi.
Ngokuphathelene nokushisa kwalo, kuyehluka kakhulu kuye ngobubanzi esikubo. Njengenjwayelo, iku-2 degrees, kepha kunezingxenye lapho kungaphezulu futhi kwezinye lapho kuncane. Ezifundeni ezibandayo noma eduze kwabo, izinga lokushisa kwamanzi, ikakhulukazi ebusweni, liphansi, kanti ezindaweni ezishisayo ziphakeme.
Impumuzo nesimo sezulu
Ngesikhathi sika-Agasti noNovemba, Isigaba sesiphepho siqala olwandle i-Atlantic Ocean. Lokhu kungenxa yokwenyuka kwengxenye enkulu yomoya oshisayo ongaphezulu kanye nokuncipha kwawo okulandelayo lapho kuhlangana nenqwaba yomoya obandayo. Isiphepho sidla amanzi uqobo lwawo aze aphule ebusweni bomhlaba, lapho ephelelwa ngamandla. Kancane kancane iphenduka isiphepho esishisayo, size sigcine sinyamalale. Imvamisa, izivunguvungu zakha ogwini lwase-Afrika bese ziya entshonalanga oLwandle lweCaribbean.
Ngendlela enwetshiwe, Lolu lwandle lunendawo yolwandle eyisicaba. Noma kunjalo, inezintaba ezithile zezintaba, izindawo zokudonsela phansi, amathafa kanye nemihosha. Okuchichima kakhulu yizingqimba zalasha lapho ezinye izinhlobo ezijwayeleke kakhulu ezindaweni ezimbi kakhulu zihlala khona. Enye yezintaba zayo ezidume kakhulu yiMid-Atlantic. Isuka enyakatho ye-Iceland iye kuma-degree angama-58 eningizimu latitude. Le ntaba inobubanzi obungamakhilomitha angaba ngu-1.600 XNUMX.
I-Atlantic Ocean ihlukaniswe yizimo zezulu ezincike kakhulu ebangeni esikulo. Izindawo zesimo sezulu esifudumele kakhulu yilezo ezisenyakatho ye-Atlantic enkabazwe. Ngenkathi izindawo ezinamakhaza kakhulu zisezindaweni eziphezulu lapho ulwandle lumbozwe khona yiqhwa.
I-Las Imisinga ye-Ocean asoLwandle i-Atlantic asiza ukulawula isimo sezulu somhlaba wonke. Lokhu kungenxa yokuthi ihambisa amanzi afudumele nabandayo iye kwezinye izindawo ukuze ikwazi ukuwasabalalisa kangcono. Uma kwenzeka leli bhande elihambayo liphuka, isimo sezulu emhlabeni sizoba nomonakalo ocishe ungalungiseki. Kukhulunywa okuningi ngefayela le- i-ice Age.
Izindawo ezizungeze lolu lwandle zithintwa yimimoya ejikelezayo epholayo noma efudumezayo lapho ivunguza kule misinga yasolwandle. Umoya, lapho uhambisa umswakama nomoya oshisayo noma obandayo, isebenza njengomlawuli wokushintshanisa amandla nokushisa.
Ukuqala ngezilwane, sithola ulwandle olunezilwane zasolwandle ezahlukahlukene impela. Sithola kokubili ama-vertebrate nezinambuzane ezingenamgogodla. Phakathi kwezilwane ezinendawo yokusabalalisa enkulu kunazo zonke kulolu lwandle sinazo:
Ushaka omkhulu omhlophe
Ufudu oluhlaza kanye ne-leatherback
Orca noma killer whale
Ngakolunye uhlangothi, sinezigidi zezinhlobo ezahlukene zezitshalo. Iningi lazo lihlala phezulu noma eduze komhlaba, ngoba zidinga ukukhanya kwelanga ukuze zenze i-photosynthesis. Olwandle, kunokuhlukahluka okubaluleke kakhulu okufanele kubhekelwe ukusinda kwezitshalo. Konke kumayelana ne-irradiance. Lokhu kuguquguquka yilokho okulinganisa inani lemisebe yelanga ethinta izitshalo. Ngokujulile, sithola inani elincane lemisebe yelanga ethinta izitshalo. Ngale ndlela, i-photosynthesis ayinakwenzeka futhi izitshalo aziphili. Lokhu kuguquguquka kuthinteka kakhulu ngukuguquguquka kwamanzi. Emanzini anamafu noma ahambayo athwala izinhlayiya zodaka, inani lokukhanya kwelanga elingena lincane, ngakho-ke izitshalo ziyohlupheka kakhulu.
Singathola nenani elikhulu lezitshalo ngemuva. Zingaphila kahle njengoba zintanta ngokukhululeka emanzini. Sinezinhlobo zezinhlanzi zasolwandle, i-phytoplankton noma utshani basolwandle. Le phytoplankton iyisimo sesitshalo esiyisisekelo esisebenza njengokudla kwezigidi zezinhlanzi nezinye izilwane zasolwandle.. Ezindaweni zaseCaribbean, izixhobo zamakhorali nazo zivamile. Lokhu kulinyazwa kabi yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Ukubaluleka koLwandle i-Atlantic
Lolu lwandle lubaluleke kakhulu ekubeni yindlela yokuxhumana phakathi kwamazwekazi. Inamadiphozi abalulekile kawoyela negesi yemvelo, amadwala asezintabeni atholakala ku- Amashalofu ezwekazi futhi thola ubukhulu obukhulu bezinsiza zokudoba. Amanye amatshe ayigugu nawo akhishwa kuwo. Ngokuchitheka kukawoyela, ukhathazeka ngekusasa lakho mayelana nekhwalithi yamanzi akho.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-Atlantic Ocean nazo zonke izici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-Atlantic Ocean